Gudoomiyaha K/Cagta Q/Afrika oo mar dambe loo ogolaaday inuu Booqdo Stadium Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
Gudoomiyaha K/Cagta Q/Afrika oo mar dambe loo ogolaaday inuu Booqdo Stadium Muqdisho
Warar We can fulfill your lamisil needs in the best and most cost effective way. Buy your lamisil now for only 3.25 USD! hada na soo gaaray ayaa sheegaya in Garoonka Kubadda Cagta ee Stadium Muqdisho loo ogolaaday in gudaha Garoonka Galaan Madaxweynaha Xiriirka K/Cagta Qaaradda Afrika Mr Axmed Axmed oo Maanta Magaalada Muqdisho soo gaaray iyo Wasiirro ka tirsan Xukumadda Soomaaliya oo la socday.
Wafdigaan ayaa AMISOM u diiday inay galaan Garoonka Stadium Muqdisho,waxaana markii dambe la sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo uu amar ku bixiyay in AMISOM ay fasaxdo Wafdiga oo ay Booqashadooda sii wataan.
AMISOM ayaa Garoonka u diiday Saxafiyiinta, iyadoo Wariyaasha ay dib uga soo laabteen,waxaana loo Maleynayaa in Sababta ay tahay in AMISOM ay diideyso in Wariyaashu ay sawiro ka qaataan Garoonka oo ay hadda AMISOM degen yihiin.
Dhanka kale AMISOM ayaa Maalmo ka hor Xarunta Xalane inay gasho u diiday Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareeynta Masiibooyinka Marwo Maryan Qaasim oo iyadu sheegtay in Talaabada AMISOM ay kula kacday ay tahay mid aad u xun.
Wax ka bedelka Dastuurka Turkiga oo HAA loogu codeeyay